Recyclable kavha, Compostable kavha, Zvichienderana kavha - EVERGREEN
Makumi emakore ezviitiko akagonesa Jiahe evergreen kurongedza kuti ape mhinduro dzakanyanya kugadzirisika mumaphakeji anogona kugadziriswazve uye akasimba. Kunyanya nyowani yakavhurwa akawanda akaturikidzana akakwirira chipingamupinyi PE homwe inogona kutsiva yakawanda yePET uye imwe lamination homwe, zvichigonesa 100% kuti zvishandiswezve. Inopa yakanakisa hunyoro, gasi chengetedzo uye hwema chipingamupinyi, iyo yakagadzirirwa kubvumidza varidzi vezviratidzo kusvika pasherefu-hupenyu, zvichibatsira kuchengetedza chigadzirwa chitsva. Inoshandiswa zvakanyanya kupaka zvigadzirwa senge chikafu, chinwiwa, chikafu chechipfuwo, zvigadzirwa, uye kuchengetwa kwega, kuchengetwa kwemba nemamwe maindasitiri.
Homwe yedu inogadziriswazve inokudza chiratidzo chako uye nharaunda neakanaka ekupakata mashandiro uye mutengi-ane hushamwari How2Recycle kunyora. Iko kunyorera kunotaurirana zvakajeka kune vako vatengi kuti iwo mapakeji anogona kushandiswazve sei muUS neCanada ..
Iko Kudikanwa kwe100% Yakazara Inogadziriswa Homwe
Mapurasitiki akasimba, akareruka uye asingadhuri zvinhu.
Zvinogona kuumbwa nyore nyore kuva zvigadzirwa zvakasiyana siyana izvo zvinowana kushandiswa mune yakawanda mafomu. Gore rega rega, anopfuura mamirioni zana ematani epurasitiki anogadzirwa pasirese. Anenge mazana mazana maviri emabhiriyoni emapaunzi epurasitiki zvinhu zvakagadzirwa, kupupiswa furo, kudhonzwa uye kuwedzerwa mumamiriyoni emapakeji uye zvigadzirwa. inochengetedza imwe nzira, Jiahe yakasvibira kurongedza yakagadzira iyo 100% Polyethylene (PE) homwe.
Mhinduro yacho inoshandisa chinhu chimwe chete mbishi muchimiro chayo, iyo polyethylene, chinoita kuti kudzokorodza kwayo kuve nyore muzvikamu zvepamberi nepashure pekushandisa, chero paine cheni, zvinokwanisika kushandisa zviratidzo zvekudzokorodza zvepasi rese: 4 (LDPE) panzvimbo pe7 (vamwe), inomiririra mabhenefiti eketani rese rekushandisa zvakare.
Ngatiitei kuti hupenyu huve hunobatsira: Homwe yedu nyowani Inogadziriswazve kusvetuka kumberi mukugadzira zvakare kugadziriswa kwepurasitiki kurongedza chinhu chaicho. YeVanhu VePlanet. Zvirinani kune zvakatipoteredza, Zvirinani kune bhizinesi.
Zvishandiswazve & Zvishandiswezve Pouches
Kutenda homwe inogadziriswazve kubva kuYevergreen Pack, zvinotibatsira kuti tiwane imwe nhanho pane yakagadziriswa kurongedza.
Yayo yepamusoro chipingamupinyi inogadziriswa PE / Pe mabhegi anotyisa chaizvo!
Iyo yepamusoro chipingamupinyi inogadziriswazve kurongedza mhinduro yakabvisa kushushikana kwedu pasherefu nguva uye yakatibatsira isu kuchinjisa ese edu echinyakare mabhegi kune anokwanisa kudzokororwa mhando.
Kutenda nekuedza kwako kupa yakagadzika yekutakura mhinduro kukambani yedu!
Isu takakatyamadzwa zvirokwazvo neayo PE / Pe bhegi; kudhinda kwakanakisa, kumeso kudhizaina, kuvhara zipi uye hwindo rakajeka. Homwe yakanakisa inogadziriswazve yatakamboona!
Kana iwe uchida inogadzirika yekurongedza mhinduro, isu tinopa Evergreen Pack kutanga.